Abakhiqizi bengubo eChina Professional Medical Disposable Avikelayo kanye nabaphakeli | EMUVA PHAMBILI
1.i-Breathable, co-friendly, antistatic, anti-oyela,
2.Impumelelo ukuvimbela igazi, uketshezi lomzimba nokunye ukuphazamiseka kokuphahlazeka.
Ukuvinjelwa kwe-3.Bidirectional kwegciwane, amagciwane kanye nokudluliswa kwamagciwane
I-4.OEM / i-ODM iyatholakala
Igama lomkhiqizo Ingubo elahlwayo elahlayo / ingubo evikelayo
Usayizi womkhiqizo M / L / XL / XXL, S / M / L / XL / XXL
Ukusetshenziswa Izinsiza kusebenza Zokuphepha Zivikela
Izinto zokwakha kk + ikhasi 73g
Uhlobo lomkhiqizo EN14126
Umsuka I-China (Mainland)
Imodeli NO. Ama-Unifomu Okusebenza Kwezembozo Zokuphepha Zokusebenza
Ukwenza ngokwezifiso I-OEM / i-ODM iyatholakala
Inzalo Nge-EO gas / Radiation
I gama le-brand I-MEIYIMEI
Insimbi classifica isigaba 1
Ukuvikela ukwakheka okwezingubo zokuzivikela
Design 1.Hooden: ikhanda hooden design, cap design nokunwebeka, kungavimba uthuli kanye badgecreatures;
Idizayini ye-2.Zipper: Kulula ukugqoka nokukhumula nokubekwa uphawu okungcono;
Izindwangu ze-3.Elastic: I-Telescopic, isithiyo esisebenzayo sokusebenzisa kalula;
4.Loose okhalweni design: Nokunwebeka okhalweni design, gqoka okwengeziwe, ukuhlangabezana nezidingo izibalo ezahlukene.
Ingubo evikelayo yezokwelapha elahlwayo ingahlukanisa ngempumelelo ukufafaza amagwebu omlomo emsebenzini nakweminye imvelo ezungezile. Umthelela omncane obukhali we-chips yensimbi, amatshe agayiwe, i-spatter yamakhemikhali nendodana.
Kungani ukhethe indwangu yethu yokuzivikela:
1. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yesipiliyoni ekukhiqizweni nasekusebenziseni ingubo yokuzivikela
2. Ubuchwepheshe buhle futhi buvuthiwe
3. Umugqa wokukhiqiza othuthukile othuthukile
4. Okuhlukile kwezembatho zokuvikela ezingakhiqizwa
5. Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile kokuvalwa okuvikelayo
Langaphambilini Ikhithi yesampula ye-ORIENTMED Virus
Olandelayo: 3ply ubuso obulahlwayo buso bohlobo I, Uhlobo II, Uhlobo IIR